किन "Kaspersky" स्थापना गरिएको छैन?
Kaspersky ल्याब देखि एन्टी-भाइरस टुलकिट धेरै पीसी मालिक द्वारा ज्ञात छ। यो कार्यक्रम deservedly छ विरुद्ध सुरक्षा को प्रभावकारिता तुलना समीक्षा मा एक अग्रणी स्थिति ओगटेको "मालवेयर।" तपाईं लाभ र "Kaspersky" को बेफाइदा बारेमा लामो तर्क गर्न सक्छन्, तर एउटा कुरा स्पष्ट छ - यो एन्टिभाइरस सबै भन्दा राम्रो को छ। तथापि, स्थापना गर्दा केही प्रयोगकर्ताहरू समस्या सामना गर्ने "Kaspersky" स्थापना गर्दा छैन। सबै भन्दा राम्रो मामला मा, एक त्रुटि सन्देश (जो कोड मा तपाईं कारण पत्ता लगाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ), र मा खराब, स्थापनाकर्ता बस इस्तीफा। स्पष्ट छ, सोध्दै हुनुहुन्छ धेरै: Kaspersky "के गर्न?" "स्थापना गर्न सक्दैन"
कारण को प्रशस्त
धेरै स्रोतहरु यो समस्याको समाधान प्रस्ताव, तर केही अवस्थामा यो चाँडै बुझ्न सम्भव छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद। एक विफलता कारण विरोधी-भाइरस स्थापना दिइएको हार्डवेयर र सफ्टवेयर विन्यास र सधैं व्यक्तिगत होसियार विश्लेषण आवश्यक छ। प्रश्न गर्न विश्वव्यापी जवाफ "Kaspersky Anti-भाइरस स्थापना किन 'अवस्थित छैन। तसर्थ, यस लेखमा विफलता को सबै भन्दा साधारण कारण केही प्रदान गर्दछ।
पहिलो स्थानमा अनुकूलता समस्याहरू छन्। XP, विन 7, विन 8 र अन्तिम परिमार्जन «Windows» - - विन 8.1 तपाईं थाह छ, प्रयोगकर्ताको कम्प्युटरमा सक्रिय माइक्रोसफ्ट देखि चार सञ्चालन प्रणाली को एक द्वारा प्रयोग भइरहेको छ। र विशेष रूपमा विरोधी-भाइरस रूपमा जटिल कुनै पनि कार्यक्रम, को कार्यान्वयन वातावरण गर्न आवश्यकताहरू विशेषता छ, अर्थात्, अपरेटिङ सिस्टम। उदाहरणका लागि, यो तपाईं राम्रो "आठ" संग तदनुसार 8 विन लागि, "2013" कार्य "2012" को संस्करण स्थापना गर्ने प्रयास गर्नुहोस् भने, तर एक अद्यावधिक विन 8.1 काम गर्न सक्दैन, कि "Kaspersky" स्थापना गरिएको छैन अचम्मको छैन। साथै, "Kaspersky" को सबै भन्दा छैन पनि जीत XP मा, उत्तरार्द्ध प्याकेज SP2 वा पछि अद्यावधिक स्थापित छ भने स्थापित छ। माथिको एउटा परिणाम, निम्न: स्थापना गर्नु अघि, तपाईं आफैलाई इच्छित संस्करण को सिस्टम आवश्यकताहरु संग familiarize र पहिले नै कम्प्युटरमा प्रयोग तिनीहरूलाई तुलना गर्नुपर्छ।
केही अवस्थामा यो, फरक बिक्रेताबाट धेरै एन्टी-भाइरस प्याकेजहरू स्थापना गर्न "Kaspersky" को आदर मा सम्भव छ हुनत भइरहेको छैन। स्थापनाकर्ता सक्रिय कोड अन्य सुरक्षा उत्पादन लगािन्छ भने, स्थापना भएको नक्कली कार्यक्रम हटाउन म्यापिङ आवश्यकताहरु संग अवरोध गरिनेछ। साथै, कहिलेकाहीं "Kaspersky" कारण यो अगाडि खडा उत्पादन अर्को संस्करण सही हटाइएको थियो भन्ने तथ्यलाई स्थापित छैन। यस मामला मा, तपाईं "remnants" गर्न सक्नुहुन्छ पूर्ण स्थापना रोकन हटाउन जो मार्फत, विकासकर्ता साइट KAVremover निःशुल्क कार्यक्रम देखि डाउनलोड गर्नुपर्छ।
स्थापना समस्या संक्रमित कम्प्युटर केही भाइरस कि उत्पन्न गर्न सक्छ: केही "मालवेयर" स्थापना आवेदन को अनुगमन प्रदर्शन र Kaspersky बस स्थापना प्रक्रिया रोक्न पत्ता लगाएका छौं। यो plausible सन्देश गाह्रो निदान र कारण खोजी गर्न बनाउन जारी हुन सक्छ। यसरी, प्रणाली आवश्यकताहरू उत्पादन अनुरूप, तर स्थापना असफल भएमा, तपाईँ मुक्त सफ्टवेयर Kaspersky VRT डाउनलोड र आफ्नो कम्प्युटर स्क्यान गर्नुपर्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर निको गर्न, अर्को विक्रेता बाट एन्टिभाइरस सफ्टवेयर स्थापना गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि Kaspersky स्थापना गर्नुहोस्।
नेटवर्क नशहरुको प्रेमी नशहरुको प्रेमी। विवरण: एक नशहरुको प्रेमी के हो
एन्टिभाइरस चिनियाँ Baidu कसरी हटाउने? कसरी चिनियाँ वर्ण संग एक कार्यक्रम हटाउन?
निःशुल्क एन्टिभाइरस "Kaspersky मुक्त": समीक्षा, स्थापना
कसरी पासवर्ड संग आउन? प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड
कसरी कन्फिगर गर्न इन्टरनेट एक्सप्लोरर ІE मा विस्तारित सुरक्षा कन्फिगरेसन?
कसरी चमकता पछि "एन्ड्रोइड" फोनमा आइएमएआइ पुनर्स्थापना?
प्रोबायोटिक "Probiz Femina": निर्देशन, गुण र संरचना
सूखे मितिहरूको क्यालोरी सामग्री (प्रति 100 ग्राम)
मानव leukocytes को संरचना। सेतो रक्त को संरचना को सुविधाहरू
आफ्नै ब्रान्ड उत्पादन र खुद्रा व्यापार उद्यम। ट्रेडमार्क दर्ता
त्यसैले राम्रो हुक्का khalil Mamoon के हो?
काँध-लंबाई बाल लागि Hairstyles। राम्रो र आरामदायी
तेस्रो - छैन एक पटक। त्यो तेस्रो बच्चाको लागि अनुमति?
माटोको टाइल्स लागि ड्रिल बिट। के ड्रिल माटोको टाइल ड्रिल? ग्लास लागि अभ्यास र माटोको टाइल (फोटो)
"Koschey" (धातु): एक अवलोकन, सुविधाहरू, सेटअप, क्षेत्रीय
बौद्ध बारेमा सबै भन्दा राम्रो चलचित्र
Dobrudja होटल3(बुल्गारिया, Albena): स्थान, सेवा र प्रतिक्रिया
"हत्याराको सिद्धन्त" फिल्म: अभिनेता, भूमिकाको र षड्यन्त्र